BEE: Manangana Ary misintona ny mailaka mamaly amin'ny finday maimaim-poana | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 8, 2021 Alarobia, Febroary 9, 2022 Douglas Karr
Maherin'ny 60% ny mailaka rehetra nosokafana amin'ny finday araka ny foana Contact. Tena manaitra ny orinasa sasany mbola miady amin'ny fananganana mailaka mamaly. Misy fanamby 3 amin'ny mailaka mamaly:
Mpanome tolotra mailaka - Betsaka ny mpamatsy mailaka no mbola tsy manana drag & drop drop fahaiza-manao fananganana mailaka, noho izany dia mila fampandrosoana an-taonina avy amin'ny masoivohonao na ny ekipa fampandrosoana anatiny hamoronana ireo modely ireo.
Mpanjifa mailaka - Tsy ny mpanjifa mailaka rehetra no mitovy ary ny ankamaroan'izy ireo dia mandefa mailaka tsy mitovy amin'ny hafa. Vokatr'izany, ny fitsapana amin'ny mpanjifa sy fitaovana mailaka dia indostria ho azy irery.
Development - Raha mahafantatra HTML sy CSS ianao, dia afaka mamorona pejin-tranonkala mamaly mamaly mora foana… fa ny fananganana ankanavaka ho an'ny mpanjifa mailaka rehetra dia mety ho nofy ratsy. Mitaky fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha lehibe izy io, na miaraka amin'ny modely voasedra sy novaina be.
Betsaka izao ny toerana an-tserasera ahafahanao mahita sy misintona modely mailaka maimaimpoana izay mamaly tanteraka. Raha tena mahay mivoatra ianao, dia azonao atao matetika ny mamadika ireo singa ary manangana mailaka mahafinaritra ho anao. Na izany aza, tsy mahafinaritra ny fanovana kaody manta ao ambadiky ny mailaka…… manadino fomba iray na kilasy ary ho mahatsiravina ny mailakao.
Te-handahatra ny mailaka aho amin'ny Martech Zone mandritra ny fotoana kelikely ary tena manana serivisy mailaka anay mihazakazaka ao amin'ny mpizara anay izahay izay mitentina denaria amin'ny dolara raha ampitahaina amin'ireo mpamatsy hafa. Miaraka amin'ireo mpanjifa maherin'ny 30,000, tsy azoko atao ny manamarina ny fandaniana amin'ny ankamaroan'ny mpanome tolotra mailaka ka nanangana ny tenanay izahay!
BEE mpamorona mailaka mamaly
Rehefa nijery ireo modely manodidina ny tranonkala tiako aho dia sendra ny BEE, orinasa namorona fitaovana mahafinaritra vitsivitsy:
Plugin BEE - tonian-dahatsoratry ny pejy mailaka tafiditra tanteraka ho an'ireo orinasa SaaS hampidirina ao anatin'ny sehatr'izy ireo.
BEE Pro - workflow famolavolana mailaka ho an'ny mpamorona mailaka matihanina hiaraha-miasa sy hivoatra.
BEE Maimaimpoana - mpanorina mailaka maimaimpoana mamaly maimaim-poana izay azonao atao ny mamorona modely avy hatrany am-boalohany na manafatra modely mailaka mamaly maimaimpoana an-jatony.
Zahao ny mailaky ny BEE sy ny mpanorina pejy fitobiana
Tao anatin'ny adiny iray dia afaka nanangana ny mailako aho, nanoratra azy io ho an'ny fitaovana finday, nandefa fitsapana ho ahy ary naka ny kaody… maimaim-poana daholo!
Voalohany, nisafidy modely banga aho avy eo nanamboatra ireo fizarana izay tadiaviko sy nampiasako ny sarin'ny placeholder. Handahatra izany aho Martech ZoneNy môdely indray mandeha dia eo amin'izay toerana itiavako azy marina.
Avy eo aho nijery ny mailaka ho an'ny birao ary nanao fanovana madinidinika momba ny elanelana sy ny padding.
Nijery tamin'ny finday aho ary nanao fanovana fanampiny. Manolotra ny fotoana hanafenana entana ho an'ny birao na finday ny tonian-dahatsoratra, mba hahafahanao manamboatra tsara ny traikefa finday.
Avy eo nandefa ny mailako avy tany amin'ny Editor an'ny BEE aho:
Ny tonian-dahatsoratra koa dia ahafahanao manana fiaviana mangarahara izay toa tsara raha mampiasa Dark Mode amin'ny mailakao mpanjifa.
Raha vantany vao tonga lafatra ny zava-drehetra, dia afaka naka ny fisie fisie HTML feno sy sary sosialy rehetra izay nampidirina niaraka tamin'ny interface-ko. Manana safidy vitsivitsy ihany izy ireo amin'ity fotoana ity, na izany aza, raha misoratra anarana amin'ny kaonty BEE Pro voaloa ianao.
BEE eo am-pitadiavana gazety vaovao nohavaozina avy Martech Zone!
Atombohy ny fananganana ny mailaka anao mamaly amin'ny BEE
Fampahalalana: mampiasa rohy mpiara-miasa amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: tonian-dahatsoratry ny tantelytantely plugintantely prompamoaka mailakampamoaka mailaka maimaimpoanampamoaka mailaka an-tseraserampamoaka mailaka mamaly